जापानी भाषामा कुरा गर्दा धेरै प्रयोग हुने १० छोटा वाक्यांशहरू – NESAJ
जापानी भाषामा कुरा गर्दा धेरै प्रयोग हुने १० छोटा वाक्यांशहरू
के तपाईलाई जापानी भाषा सिक्न रमाइलो लाग्छ ? जति सुकै लामो समयदेखि जापानी भाषा सिक्दै र बोल्दै आउनुभएको नै किन नहोस् जापानमा कुराकानीको क्रममा प्रयोगमा आउने केही यस्ता शव्दहरु छन् जसको प्रयोगले कुराकानीलाई झन रोमाञ्चक बनाउँछ । जापानी भाषामा कुराकानी गर्दैगर्दा धेरै ठाउँहरुमा प्रयोग गर्न सकिने यि १० वाक्यांशहरु र कस्तो अवस्थामा तिनको प्रयोग गर्ने भन्नेवारेमा थाहा पाइराख्नुभयो भने काम लाग्छ ।
1.やった(यात्ता) – yeah ! केही कुरामा जीत हासिल गरेपछि प्रयोग गरिने शब्द, यो शब्दलाई खुशी, आनन्द र विजय व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ।
2.本当(होन्तोउ) – हो र ? यो वाक्यांश अविश्वसनीय कुरा निश्चित गर्न प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले प्रश्न चिन्ह प्रयोग गरिन्छ र सोध्दा तपाईंको आवाज उठाइन्छ ।
3.もちろん(मोचिरोन) – अवश्य ! यो वाक्यांश तपाईंले बोलेको कुरा साचो हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न प्रयोग गरिन्छ ।
4.良かった(योकात्ता) यो वाक्यांश तपाईंको भावना र मन परिवर्तन हुदाँ प्रयोग गरिन्छ । जस्तै – जब तपाईको हराएको १० हजार येन नोट रतपाईंको कोठा भित्र फेला पर्छ त्यति खेर 良かった(योकात्ता) शब्द प्रयोग गरिन्छ ।
5.何? なに?(नानी?) – के? जब तपाइँ स्पष्ट कुरा सुन्न सक्नुहुन्न वा सुन्नुभएको कुरा सत्य हो भनेर पुष्टि पार्दै हुनुहुन्छ त्यति खेर तपाई यो वाक्यांश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यो वाक्यांश प्रयोग गर्दा अशिष्टको रूपमा आउन सक्छ, त्यसैले यसलाई तपाईंको उमेर वा घनिष्ठ मित्रहरूसँग मात्र प्रयोग गर्नु होला ।
6.全然(जेन्जेन्) – कति पनि होइन यो वाक्यांशलाई सकारात्मक अर्थ देखाउन प्रयोग गरिन्छ । तपाईलाई केही काम गर्न लगाएमा , केही कठिनाई नमानिकन, अ म गर्छु भनेर उत्तर दिदाँ यो वाक्यांश प्रयोग गरिन्छ ।
उदाहारण あなたの作文は全然だめだというわけではない。 (आनता नो साकुबुन् वा जेन्जेन् दामेदा तो इउ वाके देवा नाइ ) – तपाईंको निबन्ध पूर्ण रूपमा गलत छैन।
7.どうしょう(दोउस्योउ) – के गर्ने होला ? यो वाक्यांश तपाई कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ र तेती बेला तपाईलाई के गर्ने केही थाहा हुदैन तेती बेला प्रयोग गरिन्छ ।
उदाहरण [次はどうしょうか] と彼女は独り言を言った。([चुगी वाँ दोउस्योउका] तो खानोज्योवा हितोरीगोतो वो इत्ता ) – [अर्को पटक, के गर्ने होला ? ] आफैले भन्नुभयो।
8.びっくりした(बिक्कुरीसिता) – सात्तो लग्यो , अचम्म लाग्यो यो वाक्यांश तपाई तर्सिदाँ , अथवा केही अप्रत्याशित घटना घट्दा अथवा अचम्म लाग्दा प्रयोग गरिन्छ ।
उदाहारण ガチャンと言う音で私達はびっくりした。 (गाचियान तो इउ ओतोदे वातासीताचीवा बिक्कुरीसिता ) – ‘गड्यान्ग ‘ गरेको आवाजले हामी सबै तर्सियौँ ।
9.やっぱり(याप्पारी) – मैले पनि त्यस्तै सोचेंको थिए , साच्चै यो वाक्यांश केही घटना आफुले सोचे जस्तै हुन जादाँ प्रयोग गरिन्छ ।
उदाहारण 和菓子(わがし)にはやっぱり日本茶(にほんちゃ)が合う。 (वागासी नि वा याप्पारी निहोनच्या गा आउ) – मैले सोचे जस्तै जापानी मिठाईको लागि सबै जापानी चिया उपयुक्त हुदोरहेछ ।
10.そうですか(सोउदेस्का) – हो र, हो यो वाक्यांश तपाईंको स्वीकृति देखाउन वा तपाइँले सुन्नु भएको देखाउन प्रयोग गरिन्छ । यसलाई そっか(सोक्का), そうだね(सोदाने), そうね(सोउने) को स्वरुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।
उदाहारण 昨日私は名古屋に行ったよ。 (किनोउ वातासीवा नागोया इत्तायो) そうですか。 (सोउ देस्का) – हो र । आशा छ यो जानकारी तपाईलाई मन पर्यो । उपयोगी लागेमा सेयर गरेर आफ्ना साथीहरुमाझ पुर्याइदिनुस् न है ।
は、も पार्टिकल र か को प्रयोग
जापानी भाषामा रिरेकिस्यो भर्दा प्रयोग हुने शब्दहरुको नेपाली अर्थ ।
जापानमा काम अथवा कलेजमा आबेदन दिदाँ अन्तरबार्तामा सोधिने केही प्रश्नहरु
जापानमा केही समस्या परेर मद्दत माग्नुपरेमा के भन्ने ?